I-Ulexite, ilitye leTV, umabonwakude - Ilitye leTV - ividiyo
Thenga i-eloxite yendalo kwivenkile yethu
I-Ulexite, i-hydrogen sodium calcium borate hydroxide, ngamanye amaxesha eyaziwa ngokuba li-TV, sisimbiwa esenzeka kwimilayita emhlophe ebomvu ejikeleze ikristali okanye kumacala afanayo. Imicu yendalo ye-ulexite iqhuba ukukhanya ecaleni kwamagxa ayo amade, ngokubonakaliswa ngaphakathi.
I-Ulexite yiminerali eyinkimbinkimbi ngokwendlela, enesiseko esisiseko esinee-sodium, amanzi kunye ne-hydroxide octahedra. Amakhonkco adityaniswe kunye yicalcium, amanzi, hydroxide kunye neoksijini polyhedra kunye neeyunithi ezinkulu ze-boron. Zenziwe ziitrahedra ezintathu ze-borate kunye namaqela amabini abunxantathu.
I-Ulexite ikwabizwa ngokuba lilitye leTV ngenxa yeempawu zalo ezingaqhelekanga. Iintsinga ze-ulexite zisebenza njengeentsinga ze-optical, zidlulisa ukukhanya kunye nobude bazo ngokubonakaliswa kwangaphakathi. Xa isiqwenga se-eloxite sinqunyulwa sibuso obucekeceke bubuso bungaphambi kobungqamlezo lweentsinga, umfanekiso olungileyo olungileyo uya kubonisa umfanekiso wawo nawuphi na umphezulu osondele kwelinye icala.
Isiphumo se-fiber optic sisiphumo sokungqengqeleka kokukhanya kube kukuhamba kancinci kunye nokukhawuleza ngaphakathi kwefayibha nganye, isibonisi sangaphakathi sokukhanya kancinci kunye nokucaphukisa kwereyithi ekhawulezayo kwi-ray ecothayo kwifayibha ejongene nayo. Iziphumo ezinomdla zizukulwana zee-cones ezintathu, ezimbini zazo zenziwe polar, xa umqala we-laser ukhanyisa ngokuthe ngqo imicu. Ezi khonkco zinokubonwa xa ujonga umthombo wokukhanya ngokusebenzisa amaminerali.
Ilitye leTV / umabonwakude
I-Fibrous aggregates yeprojekthi ye-ulexite umfanekiso wento ebekwe ngaphesheya kwimbiwa. Le propati yamehlo ixhaphakile kwiintambo zokwenziwa, kodwa hayi kwizimbiwa, ukunika i-eloxite igama lesidlaliso leTV. Le propati yamehlo ibangelwa kukubonakaliswa kweefayile ezinamawele, awona manqwelomoya aqaqambileyo abekho. Ukukhanya kubonakaliswa ngaphakathi nangaphaya ngaphakathi kwefayibha nganye ejikelezwe sisazisi sesalathiso esisezantsi. Esi siphumo sokukhanya kukwabangelwa zizithuba ezikhulu ezenziwa ngamakhonkco e-sodium octahedral kwisakhiwo sezimbiwa. Iintsinga zentsimbi ezisetyenziselwa i-fiber optics zigqithisela imifanekiso ecaleni kwengqokelela yeekristalu ezinjengemisonto ngendlela efanayo evele ngokwendalo i-ezinexite ivelisa imifanekiso ngenxa yobukho beendleko ezahlukeneyo zokuphikisa phakathi kweentsinga. Ukongeza, ukuba into inombala, yonke imibala iphinda iveliswe yi-ulexite. Umphezulu ofanayo we-ulexite usike i-perpendicular ukuya kwimicu uvelisa owona mfanekiso, njengoko ukugqwethwa kubungakanani bomfanekiso oqikelelweyo kuya kwenzeka ukuba umphezulu ungalingani nezimbiwa. Ngokumangalisayo, iisampulu zamatye ziyakwazi ukuvelisa umfanekiso oqinisekileyo, ogwenxa. I-satin spar jypsum ikwabonisa le mpembelelo ye-optical. Nangona kunjalo, imicu ilungile kakhulu ukuba ingakwazi ukuhambisa umfanekiso onesidima. Ubungqingqwa beefayibha zilingene kubukhali bomfanekiso oqikelelweyo.
I-Ulexite inceda ukuphilisa kunye nokulinganisa umbono womzimba. Ingasetyenziselwa ukunceda ekomelezeni amehlo akho kwaye woyise ukukhathala kwamehlo okufiphalisiweyo okanye umbono kabini.
Iyakususa imibimbi, ukunciphisa iintloko.
Eli litye liya kunceda ukoyisa ubunzima ngenkqubo yemithambo-luvo, ngakumbi ngokuhlaba ngendlela engachazwanga kwentliziyo. I-Ulexite iya kuphucula inkumbulo yakho kunye nokugxila.
Ulexite, ovela Boron, California, USA